Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 24/01/2020)
Creamfields ndiyo imwe Best Festivals in Europe uye muUK kuti chikuru kutamba mumhanzi mutambo. Kunyatsoshandisa Bank yako zororo muna August uye bhuku tikiti kune Mega bato!
Havana matanho vakatsaurira neimba, EDM, Techno, Drum uye bass, nomweya, tsvina uye zvakawanda, zvichiita Creamfields kuti vaende-kuti mutambo kuzotamba mumhanzi Fans mu Britain.
Izvi makore 2019 kuti mutambo kunouya vane mhepo ine exclusivity. Vachava voga chehondo iconic kutamba supergroup Swedish House Mafia ari UK. Vachavakwawo nemitambo Deadmau5 uye chokupika Cirez D rokutanga & Adam Hwange.
kubatana 70,000 vanhu kuti vadzoke Summer ose kunakidzwa immersive mumatanho itsva, paakaita inogadzirwa mumatunhu, chiedza chinoratidza uye pyrotechnics.
Tiri kuda mutambo uyu nokuti mifananidzo zvose kwezvikonzero. Kunze kwavo Ultra cryptic mashoko avo evanhu nevezvenhau platforms pamusoro okupedzisira mashoma, runyerekupe vakanga yodzoka pamusoro chii 'The New Normal’ zvinogona kureva. Buda The primavera Facebook peji kuona chii isu kureva.
Zvikurukuru forgoing tsika imwe kana maviri headliners rimwe zuva inonyatsoita, musangano kunge rakazara pamusoro bhiri rimwe zuva aine pfuma tarenda, kusanganisira likes ose Erykah Badu, pingudza Impala, Solange, Future, Cardi B, Interpol, Janelle Monáe, Robyn, panguva, Christine uye Queens, James Blake uye Mac DeMarco.
Chii isu kufanana pamusoro mutambo uyu uye chii Anovagarisa kunze kwatiri?
The weight they put on art as well as music. There are multiple venues including a circus, mitambo, miziyamu kota uye zvakawanda. Artists uye vatambi dzinobva munyika yose kuratidza matarenda avo. Panewo mikana Szitizens uye Artists kushanda pamwe chete kuitira kuti kusika asingakanganwiki uye hune mifananidzo.
Kana kuti akanga asiri tonhorera zvakakwana, vari zvakare eco ushamwari! Vanoedza kutaura kuti mashoko pose vanogona uye ndinzwirwe mutambo goers kuti sezvo eco vanoziva.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-festivals-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)